Odayaasha magaalada Baladweyne oo diiday amar ka soo Baxay Dowladda Federaalka – Banaadir weyne
Odayaasha magaalada Baladweyne oo diiday amar ka soo Baxay Dowladda Federaalka
Baladweyne – Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay Odayaasha dhaqanka Hiiraan, waxaana kulankooda ay uga hadleen Amar dowladda ku bixisay in Ciidamo looga qaado Magaalada Baladweyne.
Odayaasha dhaqanka Magaalada Baldweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa ka horyimid Amarka dowladda Soomaaliya ku bixisay in Ciidamo laga daabulo Baladweyne, isla markaana la geeyo deegaano ka tirsan Galgaduud gaar ahaan Magaalada Dhuusamareeb.
Sidoo kale Odayaasha ayaa dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in faragelin ay ku heyso shacabka Magaalada Baladweyne, taasina ay tilmaameen in ay tahay wax aan u dul-qaadan karin.
Waxaa kaloo Odayaasha ay dalbadeen in Magaalada ay si deg deg ah uga baxaan Saraakiil ka socota dowladda dhexe oo ku sugan Baladweyne, isla markaana xalay halkaas gaaray.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayan in Mas’uuliyiin ka tirsan Gobolka Hiiraan ay ka soo horjeedaan in Ciidamo lagu daabulo Gobolka Galgaduud.
Ciidamada la sheegay in loo qaadayo Gobolka Galgaduud ayaa la sheegay in aysan hubeysneyn, hayeeshee dowladda ayaa sheegtay in wixii hub iyo agab ciidan ah loo dhameystiri doono marka ay tagaan deegaanada dowlad Goboleedka Galmudug. – Somali Weyn News